YEYINTNGE(CANADA): Saturday, May 16
ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းတို့—! ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည် အားလုံးတက်ညီ လက်ညီဖြင့်အ ထွေထွေသပိတ်ဆင်နွှဲရမည့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
န.အ.ဖ စစ်မိစ္ဆာများ၏ဆိုးရွားမှုသည်တနေ့တခြားပိုမိုဆိုးရွားယုတ်မာလာပါသည်။ ပြည်သူလူထူကြီးတရပ်လုံးရှိခိုး ပူဇော်ရာဖြစ်သော သံဃာ တော် များကိုပင် စစ်ဖိနပ်နဲ့ကန်ကျောက်၊ ၀ါးရင်းထုတ်နဲ့ရိုက်သတ်၊ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ကာ ယုတ်မာချင်တိုင်းယုတ်မာနေကြ ပါသည်။ ယခုထိသံဃာတော်အများအပြား န.အ.ဖ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်အနှိပ်စက်ခံအညှင်းဆဲခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယခု အခါ အပြစ်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးထားသော အမျုိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အား မေလ ၃၀ရက်နေ့တွင်မဖြစ်မ နေလွတ်ရမည်ဖြစ် သောကြောင့် မလွှတ်ချင် သည့်အတွက်အကောက်ကြံကာ မိမိယူထားသောလုံခြုံရေးမိမိမှာတာဝန်ရှိတာကို တခြားလွဲချကာ အကောက်ဥာဏ်ဆင်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အင်းစိန် ထောင်သို့ပို့ချင်းသည် ငါတို့ကြိုက်တာလုပ်မည်၊ ဘယ်သူ့မှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဟု
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုစော်ကားရာစိန်ခေါ်ရာရောက်နေပါသည်။သို့ပါ၍ အခု န.အ.ဖ စစ်အစိုးရ၏ရိုင်းပြစော်ကားမှုများသည် အလွန် ဆိုး ရွားနေပါသောကြောင့် လာမည့်မေလ၃၀ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားကာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အကျဉ်းသားများအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပါ။ ယခုတောင်းဆိုထားသောအချက်ကိုမလိုက်နာပါက မေလ၃၁ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှ စတင်ကာတနိုင်ငံလုံးလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇောင်းမကျန် အထွေထွေသပိတ်ကြီး ဆင်နွှဲမည်အားလုံးအသင့်ပြင်ထား ကြပါ။
Ah Yae Kyi Pye-Munn Aung - Ko Nget (Htoo Eain Thin)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/16/2009 1 အကြံပြုခြင်း
global action for Free Daw Suu... The event in Vancouver
Dear comarade and all Burmese people
In Vancouver area on monday, Burmese Democracy Activists are trying to organize and to be holdingademonstration for free Daw Aung San Suu Kyi.
in briefing, All free Burma Democracy activists collecttively organize this event to be successful , to be more effective, and more impact on it.
Therefore, We wanted to all of you to join and cooperation and participation on these global action for Free Daw Suu.
The event in Vancouver,
Date : Monday May 18/2009
Time: 12:00 noon to 2pm
Place: Robson Square(Down Town, Vancouver)
Contact Persons : Kyaw Thi Ha (604-619 1270)
Mya Thwin (778-789 9603)
Ps.We request all freedom loving Canadians to join us in our action in support of Aung San Suu Kyi and freedom and democracy in Burma.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/16/20090အကြံပြုခြင်း
I urgently call on you to immediately intervene to secure pro-Democracy leader Daw Aung San Suu Kyi’s release from Insein Prison, Yangon.
As you are likely to be aware she is currently detained in the maximum-security jail and is, along with other prisoners of conscience and political prisoners there, at risk of torture and ill treatment.
I am deeply concerned for Ms Suu Kyi’s safety and health - she suffers from low blood pressure and dehydration. Conditions in Myanmar prisons are appalling and will further jeopardise her health. Her regular doctor Tin Myo Win was denied access to her on7May. Following that attempted visit he was taken away by security officers and has not been seen since.
Ms Suu Kyi faces trial on Monday 18 May on what appears to be trumped up charges coinciding with the expiry of her home-detention at the end of this month. She has been detained for 13 of the past 19 years, mostly under house arrest, during which period the Myanmar government has continued to act in utter disregard for the human rights of most of its people.
A unified voice is needed to stop the Myanmar government from acting with impunity and to prevent this desperate situation from deteriorating further.
Please urgently raise the above concerns with the authorities in Myanmar and demand that on her release Ms Suu Kyi is not returned to house arrest. Additionally, I ask you to call on the UN Security Council to make the same demand.
VOICE OF BURMA (MAY17)
Publish at Scribd or explore others: School Work Other Non-fiction world culture
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့ နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းနဲ့အတူ မတ်လ (၆) ရက်နေ့ ကဘဲ နအဖထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်ရှေ့ နေကြီး ဦးခင်မောင်ရှိန်ရဲ့ရှေ့ နေလိုင်စင်ကို မနေ့ က နအဖကနေ သိမ်းလိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေကြီး နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်း နဲ့ ဦးခင်မောင်ရှိန်တို့ နှစ်ဦးကို တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထဲတုန်းက ထောင်ဒဏ် (၄) လစီ အသီးသီးစီ နအဖကနေ ချမှတ်ပြီး ထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ စွပ်စွဲချက်မျိုးနဲ့ပဲ ထောင်ဒဏ် (၆) လ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုညီညီထွေးကတော့ အခုအချိန်အထိ ရန်ကုန် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဆက်လက်ရှိနေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖဟာ ပြည်သူတွေဘက်ကနေ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့ ရှေ့ နေတွေကို မတရားစွပ်စွဲ၊ မတရား ပုဒ်မတပ်၊ မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချနဲ့ပြုလုပ်လျက် ရှိပါတယ်။
ယခုအခါမှာဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပင်လျှင် မတရား အမှုဆင်စွပ်စွဲကာ အင်းစိန်ထောင်ဝန်းအတွင်းမှာ ထိန်းချူပ်ထားလျက်ရှိပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့ နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းနဲ့ရှေ့ နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်တို့ ရဲ့ရှေ့ နေလိုင်စင်များကို အခုလို သိမ်းယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ နေ့ လည်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့ နေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦေးအာင်သိန်း၏ နေအိမ်သို့နအဖမှ စာတစ်စောင်လာရောက်ပေးကာ ရှေ့ နေလိုင်စင် ရုတ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားသွားပါတယ်။
ရှေ့ နေ ဦးအောင်သိန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်မှ ခုခံချေပရန်အတွက် ပြီးခဲ့ သည့် မေလ (၁၄) ရက်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အင်းစိန်၌ ရုံးစတင်ထုတ်သည့် နေ့တွင် နအဖဖက်သို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့ နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တရားဝင်ငှားရမ်းစာ တင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ရှေ့ နေ ဦးအောင်သိန်းအား ရှေ့ နေလိုင်စင် ရုတ်သိမ်းမှုသည် လာမည့် မေလ (၁၈) ရက်နေ့ တွင် ရုံးချိန်းပြန်ချိန်းထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှ အမှုလိုက်ပါမည့် ရှေ့ နေ (၅) ဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူအား နအဖမှ အနှောင့်အယှက်ပေး တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Global Day of Action’ on Monday, May 18, 2008
Nobel Peace Prize recipient Daw Aung San Suu Kyi is Burma’s most celebrated and beloved person in the struggle for democratic governance in Burma. She has been under house arrest continuously since May 2003 and foratotal of more than 13 of the past 19 years.
The release from her house arrest was due on the 27th of May. However, on May 13, Daw Suu and her two female caregivers were detained after an incident when an American national allegedly swam across Inya Lake and stayed at her house for two days. Aung San Suu Kyi has been charged under the regime’s Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements and is being held in the notorious Insein Prison. Her trial is scheduled for May 18.
Her health has deteriorated recently, and due to the tight restrictions of her detention, she has often been denied access to her doctor, who was arrested last Thursday at the time of his monthly visit.
Burmese democracy movements and supporters around the globe are planninga‘Global Day of Action’ scheduled on May 18, 2008 to demand her release and the release of all political prisoners in Burma.
In Canada, we will show our deepest concern for her well-being and our strong solidarity with her ina‘Global Day of Action’ on Monday, May 18, 2008, by holding protests in Toronto, Ottawa and Vancouver.
We request all freedom loving Canadians to join us in our action in support of Aung San Suu Kyi and freedom and democracy in Burma.
The event in Toronto:
Zaw Wai Kyaw, phone: 416 358 2318
Aung Tin, phone: 647 343 7871
Timothy Zaw, phone: 416 735 4128
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကို ဘယ်သူ ကယ်တင် နိုင်မလဲ?
ဒီပဲယင်းတွင် တိုက်ခိုက်ခံ ရပြီး ကတည်းက တရားမျှတသည့် မည်သည့် တရားစီရင်မှု မှ မရှိပဲ အိမ်တွင်း အကျဉ်းချ အကျယ်ချူပ် ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံ နေခဲ့ရသော လူထု ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လာမည့် မေလ ၂၇ ရက် နေ့ တွင် ပြန်လွှတ် ပေးရမည့် အချိန်ကျမှ ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းကာ တနင်္လာနေ့ မေလ ၁၈ ရက်တွင် တရားစွဲဆို စီရင်ပြီး ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ဖို့ ကြံစည်နေသည့် န.အ.ဖ စစ်အုပ်စု၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာ့ လူထု နှင့် တကမ္ဘာလုံး က ဒေါသထွက် နေကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ (Amnesty International) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အရေးပေါ်ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကို တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး ......။
Dedicated to Daw Aung San Su Kyi
မလေးမေ Photoshop နဲ့ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးပါ .. အစက အရောင်ထည့်ဦးမလို့ .. ဒါပေမယ့် ရိုးရှင်းပြီးပြတ်သားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေး
ခံစားမိလို့ .. ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတယ်.
သုံးချင်တဲ့လူတွေ သုံးချင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးရအောင်လို့ .. Photoshop .psd File ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Photoshop .psd ဒီမှာပါ
BY မလေးမေ ... 5/16/20090အကြံပြုခြင်း
global action for Free Daw Suu... The event in Van...